Dawlada oo ku dhawaaqday meesha shirka barito lagu qabanayo – STAR FM SOMALIA
Xilli aynaan Dowladda Somaliya maalmihii la soo dhaafay iclaamin halka lagu qabanaayo Shirka New Deal, ee Arbacada lagu wado inuu ka furmo Magaalada Muqdisho, ayaa waxay maanta shaacisay halka lagu qaban doono.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta & Xiriirka Caalamiga Somaliya, C/raxmaan Yuusuf Cali (Caynte), oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa ku dhawaaqay in shirka lagu qaban doono Xaruntii Ciidanka Cirka Somaliya Ee Afisyooni.
Afisyooni waxay kaabiga ku haysaa Garoonka Aadan Cadde, waxaana sanadkii hore laga saaray dad barakacayaal ahaa oo deganaa, waxaana billihii ugu dambeeyay laga hirgeliyay dhismooyin cusub.
Wasiirka, ayaa sheegay in shirkaasi ay ka soo qaybgeli doonaan illaa afartan dal, iyadoo looga hadlaayo maaraynta deeqaha Dowladda Somaliya la siiyo iyo xoojinta geedi-socodka Barnaamijka New Deal ee sanadka 2016-ka.
C/raxmaan Yuusuf Cali, ayaa tilmaamay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Nicholas Kay, ay shir guddoomin doonaan shirkaasi, oo noociisa uu ku sheegay markii ugu horeysay oo lagu qabto Magaalada Muqdisho.
Caynta waxa kaloo uu shirkaasi ku tilmaamay mid heer caalami ah, isla-markaana ay martigelisay Dowladda Federalka Somaliya. Caynta waxa kaloo uu xusay in Dowladda Somaliya ay sharaf weyn u tahay, in shir ceynkaasi ah ay ku qabato Xarunta Somaliya.
Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Somaliya, Maxamed Cumar Carte Khaalib iyo C/raxmaan Caynte, ayaa maanta soo kormeeray Xarunta Afisyooni, oo lagu qabanaayo shirkaasi